Bubble, Reflections - Ambient Glow! | Martech Zone
Alakamisy Janoary 25, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Taorian'ny nanesorako ilay lohahevitra taloha nataoko dia nanomboka nitombo tato amiko ilay lohahevitra Kubrick default… madio sy tsotra izy io. Rehefa avy nahazo somotraviavy kely momba ny lohahevitra farany nataoko (tena, tena, tena namboarina aka voajirika Anaconda lohahevitra) tapaka tamin'ny WordPress 2.1, voatosika hanana lohahevitra vaovao aho ary handeha haingana.
Angamba ny tadin-tsodina ratsy indrindra (na tsara indrindra) noraisiko dia ny fanaovana bilaogy pro John Chow, izay naka fotoana tamin'ny moguling hanatona ny bilaogy ary hanome fotoana sarotra ahy. Misaotra John! Nihomehy mafy aho.
Mahatsiaro kely kokoa momba ny bilaogy aho anio hariva. Mieritreritra aho fa hanomboka ny filana lehibe manaraka amin'ny Web 3.0… mamirapiratra manodidina. Bubble dia tena applish taona vitsy lasa izay ary ny roa taona lasa dia ny fandefasana taratra Web 2.0 malaza. Miaraka amin'ny hazavana manodidina izay manintona ahy rehetra amin'ny sety LCD sy HDTV vaovao (tsy maintsy manao zavatra ianao mba hitazomana ny vidiny eo), tsy isalasalako fa io no manaraka zavatra lehibe ao amin'ny tranonkala.
Reny eto izany, ry havana! Atolotro anao ny lohahevitra WordPress Kubrick Blue Ambient Glow. Nosoloiko tsotra izao ny sary rehetra, nanisy mpivady roa hafa, ary nametaka ny sasany amin'ireo kaody tamin'ny lohateny mba hamelana toerana ho an'ny bara fisakafoanana nampiana. Tsy maintsy nanao fanovana CSS koa aho. Nijery ilay tranonkala aho tao amin'ny IE7, Firefox 2 (Mac sy PC)… hatreto dia tsara. Raha tsy tsara amin'ny IE6 izany… eh, mandehana misintona browser vaovao kokoa! Mbola afaka izy ireo!
Mbola miady amin'ny plugins mpivady aho izay 'milaza' fa vonona 2.1 izy ireo nefa mihidy ny tranonkala. Hanohy hamaky sy hampivoatra ilay tranonkala hatrany amin'ny voninahiny teo aloha aho. Mahareta!
Teny na andian-teny firaketana lehibe
Jan 26, 2007 ao amin'ny 10: 18 AM
Raha esorinao ny sakany: 100%; avy any #menubar izay tokony hamaha ny olan'ny horonan-taratasy marindrano.
26 Jan 2007 amin'ny 6:25 PM
Misaotra, Ade! Tokony hisakafo atoandro aminao aho.
Jan 26, 2007 ao amin'ny 11: 41 AM
Raha mijery tsara hatreto Doug, tiako ny mamirapiratra! 🙂
26 Jan 2007 amin'ny 6:28 PM
26 Jan 2007 amin'ny 3:23 PM
Tiako kokoa io mijery io! Toa afaka mahita zavatra eo amin'ilay tranonkala haingana kokoa aho (amin'ny alàlan'ny zavatra fanaovana baolina fotsiny).
BTW, tsapanao ve fa manosika ny fahitalavitra Philips ianao (amin'ny alàlan'ny Ad-sense) 🙂 Ary ny lahatsoratra voalohany mifandraika dia ny "Jet Blue notorian'ny mpanamory fiaramanidina Silamo" LOL. Heveriko fa ilay “Manga” no nahatonga an'io lahatsoratra mifandraika io…?
Hitako tokoa izany! Mampihomehy.
26 Jan 2007 amin'ny 6:39 PM
BTW, plugin manazava kambana inona no ampiasainao?
26 Jan 2007 amin'ny 6:56 PM
Misaotra, Sterling. Mampiasa ny hevitra nataon'i Threaded an'i Brian aho. Tsy dia ratsy loatra. Mila nametraka plugin 'misoratra anarana' hafa aho izay miasa miaraka aminy… ary tsy maintsy novaiko izany mba hanamarinana mialoha ny fisoratana anarana.
Mety hanao zavatra iray hafa aho ary manampy boaty hanamarinana ao anaty cookie izany.
26 Jan 2007 amin'ny 6:55 PM
Inona no tianao holazaina hoe glow ambient?
Tsy maintsy vaky ny monitor-ko.
Mahita lohanteny gradient sy sisintany manga….
mmmhh .. Manga…. fotsy…. zanako kely… Mihevitra aho fa mahita lamina iray.
26 Jan 2007 amin'ny 6:58 PM
Tsy sisin-tany manga izany, fa vokany volom-borona eo amin'ny sary mba hahatonga azy ho toy ny jiro ifotony. Somary manjavozavo kely.
28 Jan 2007 amin'ny 10:17 PM
Bubble… Fisaintsainana… Fa ahoana ny momba ny malaza "Drop Shadow"? Ilay nanombohany daholo!
Tadidiko ny hevitry ny olona iray niverina tany amin'ny oniversite; “Raha mahita alokaloka hafa indray aho dia handeha hody.” Indraindray, alina na alina, manontany tena aho raha mbola marary ihany izy.
28 Jan 2007 amin'ny 11:03 PM
Hadinoko ilay aloka nilatsaka 'ol! Nanomboka daholo izany, sa tsy ?!